Archive du 20190419
Rajoelina sy ny IEM 3 volana nampiesonana ny Malagasy
Telo volana kakotra anio 19 aprily 2019 no nitondran’ny filoha ankehitriny Andry Nirina Rajoelina na ny fitondrana IEM satria io no nanamarika azy. Sehoseho sy tapi-maso eraky ny tanàna no natao na inona na inona fanazavana mety hanakonana izany. Tsy misy asa goavana nisongadina, nijapy ny programan’ny teo aloha, ary tsy arakaraka ny fampanantenana natao tany amin’ny propagandy na nialoha izany aza ny zava-nisy, toy ny tamin’ny hoe efa fahavononan’ny mpamatsy vola ny IEM, araka ny fampahafantarana voalohany io IEM (Initiative pour l’Emergence de Madagascar) tany Frantsa ny 15 septambra 2018.
Tafika Malagasy Misy tsy mankasitraka ny CEMGAM vaovao ?
Taorian`ny fivorian`ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 10 aprily lasa teo dia manomboka mafana ny amin`ireny minisitera ireny ho an`izay nisy fanendrena tompon’andraiki-panjakana ambony. Vao nivoaka ny tatitra dia efa naneho ny heviny ny maro ary saika fandavana sy tsy fankasitrahana ka anisan`izany ny tafika Malagasy. Maro ireo tsy nankasitraka ny fanendrena an`ny General de Division Rakotonirina Theophile Justin ho lehiben`ny Etamazaoro jeneralin`ny Tafika Malagasy ao amin`ny minisiteran`ny fiarovam-pirenena (CEMGAM).
Mahajanga Namelona ny afom-panantenan’ny vahoaka i Dada
Nitsidika an’i Mahajanga ny Rodoben'ny Mpanangana tarihan’i Marc Ravalomanana nanomboka omaly alakamisy. Fotoana iray hanaovana angaredona hahatrarana ny tanjona iombonana izy ity. Nanolotra ireo kandidan’ny TIM any amin'ity faritany ity ny filoha Marc Ravalomanana. Notsindriany manokana fa zava-dehibe ny kandida atolotry ny antoko satria dia misy ny fitsipiky sy ny toromarika avy amin'ny mpitarika ny antoko ho an'ireo mpikambana ao aminy, ary ankatoavina sy hajaina izany.
Rovan’i Manjakamiadana Politika no nandorana azy dia politika ihany koa no hanarenana azy
Naneho ny heviny mahakasika ny fanarenana ny rovan’i Manjakamiadana na ny Rovan’Antananarivo kasain’ny fitondram-panjakana ankehitriny hatao Ny Andriana Robert, mpitazona ny hasim-piandrianan’Imerina, omaly. Nambarany fa tsy antony ara-drazana na ara-pomba akory no nandoran’ny sasany ity rova iray ity fa noho resa-politika.
Gédéon Rajaonson “Fitondrana repoblikanina tena izy no ilaina”
Aleo hipetraka amin’izay ny fitondrana repoblikanina amin’ny fotoana maharitra mba hamaha haingana ny olan’ny firenena Malagasy, hoy ny mpahay sady mpampianatra toekarena Gédéon Rajaonson. Manarak’izany dia tokony hampiseho mihitsy ny fanjakana fa akaiky ny vahoaka izy mba hiteraka fifampitokisana. Hatramin’izay dia niteraka olana hatrany ny fananan’ny antoko politika fomba fijery samihafa mahakasika ny raharaham-pirenena.